एक्कै छिनमा छालाको ड’रलाग्दा दा’ग र चा’उरीपन ह’टाउने अ’चुक घ’रेलु उ’पाय ! « गोर्खाली खबर डटकम
एक्कै छिनमा छालाको ड’रलाग्दा दा’ग र चा’उरीपन ह’टाउने अ’चुक घ’रेलु उ’पाय !
२०७७ मङ्सिर ९ गते मङ्गलवार प्रकाशित
एजेन्सी – सफा र आकर्षक छाला बनाउने रहर सबैको हुन्छ । यसैकारणले गर्दा मानिसहरु विभिन्न महङ्गा उपचार तथा सौ’न्दर्य प्र’शाधनहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर यसले चाहेजस्तो परिणाम पक्कै पनि दिन सक्दैन । आज हामी तपाइँलाई यस्तो च’मत्कारिक उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं । जस्ले तपाइँको छालामा भएको दा’ग , चा’उरीपनलाई छिटै हटाइ छालालाई नरम , सफा र च’मकदार बनाउँदछ । यो धेरै नै सरल प्राकृतिक उपचार हो । यस फे’समास्कलाई बनाउन धेरै समय पनि लाग्दैन ।त्यसैले फे’समास्कलाई छिटै तयार गरी छालाको दा’ग , घा’उ , ख’टिरा तथा चा’उरीपनाबाट छु’ट्कारा पा’उन सक्नुहुन्छ ।
आवश्यक सामाग्रीहरु:१) १ चम्चा दा’लचीनीको धुलो २) १ चम्चा कागतीको रस ३) १ चम्चा जा’इफल ४) १ चम्चा मह । बनाउने विधि:एउटा कचौरामा माथिका सबै सामाग्रीहरुलाई मि’साई बा’क्लो मिश्रण बनाउनुहोस् । यदि तपाइँको छाला सं’वेदनशील छ भने , अलि बढि महलाई मि’साउन सक्नुहुन्छ । महले तपाइँको छालालाई सु’निनबाट ब’चाउँदछ । तर रो’सासिया ( छा’ला रातो हुने रो’ग ) भएका मानिसहरुले भने यसको प्रयोग सकेसम्म नगर्नुहोस् । किनकी यसले र’क्तनलीलाई झन फ’राकिलो पा’र्न सक्दछ । केहि मानिसहरु यसको सट्’टामा क’मेरो ( व्हा’इट क्ले ) को प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
यदि मिश्रण धेरै नै बा’क्लो भएमा थोरै पानी मि’साउन सक्नुहुन्छ ।यस फे’समास्कलाई लगाउन भन्दा पहिला आफ्नो मुख साबुनपानीले रा’म्ररी धु’नुहोस् । त्यसपछि तपाइँलाई म’नपर्ने मो’इस्चराइजरलाई लगाउनुहोस् । यसपछि फे’समास्कलाई छालाको दा’ग , चा’उरी भएको ठाउँमा ल’गाउनुहोस् । यसलाई ल’गाउनाले तपाइँलाई घो’चेको वा चि’ल्लाएको म’हशुश भएमा पनि न’डराउनुहोस् । यसले झन फे’समास्कले अ’सर गरेको कुरालाई स’ङ्केत गर्दछ । यस विधिलाई हरेक दिन अ’पनाउनुहोस् । त्यसपछि तपाइँको छाला छोटो स’मयमा नै च’म्किलो , सफा र न’रम बन्नेछ ।
तपाईंले चलाई रहेको सिमकार्ड कसको नाममा दर्ता छ ? आजै यसरी चेक गर्नुहोस्
SLC फेल भएर बिनोद दुबई गए ,१ सय ६५ तले बुर्ज खालिफामा काम गरेर ‘ईञ्जिनियर’ बने